သတိထားမိကြပါသလား…? – Everybody Read TChen
ဒီနှစ်ရဲ့ ဒီလ က ထူးခြားတဲ့ လကလေးတလပါ။
တချို့တချို့တွေလဲ သတိထားမိချင်ထားမိမယ် တချို့တချို့တွေလဲအမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ပဲနေမိချင်နေမိမယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီနှစ်ရဲ့ ဒီလကလေးကတော့ ထူးခြားတဲ့လကလေးပါ။
ကိုယ်ခုနောက်ပိုင်း နာရီကို သတိထားပြီးကြည့်ဖြစ်တယ် ခဏခဏ လဲ (း) ရဲ့ ရှေ့နဲ့နောက်က ဂဏန်းတွေ တူနေတာ ကြုံဖူးတယ် တယောက်ယောက်က ကိုယ့်ကို အမြဲ လိုလို သတိတရရှိနေတယ် ဆိုတဲ့ အတွေးက ကိုယ့် ကို ပြုံးမိပြီး စိတ်ချမ်းသာစေပါတယ်။
အချစ်အပေါ်မြင်တဲ့အမြင်တွေ လက်မထပ်ဘဲ အတူနေခြင်းအပေါ်မြင်တဲ့ ကိုယ့်အမြင်တွေ ပြောင်းလဲလာပါတယ်။ အရင်တုံးက လူနှစ်ယောက်တူတူနေတယ် ဆိုတာ ကိုမယုံကြည်တဲ့ ကိုယ်၊ လက်ထပ်ခြင်း အိမ်ထောင်ပြုခြင်း ဆိုတာတွေကို အိမ်ထောင်ကွဲကလာတဲ့ အတွက် မယုံကြည်တဲ့ ကိုယ်၊ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင် က မအောင်မြင်တဲ့ အိမ်ထောင်ရေး အများစုကြောင့် မယုံကြည်တဲ့ကိုယ် အဲ့တာတွေ အကုန်လုံးဟာ လူတယောက်ရဲ့ ကိုယ့်အပေါ် စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ ခွင့်လွှတ်ဖြည့်ဆည်းပေးမှုတွေကြောင့် ပြောင်းလဲလာပါတယ်။
သူငယ်ချင်းတွေ မိသားစု အပေါ်ထားတဲ့ ကိုယ့်အမြင်တွေ ပြောင်းလဲလာတယ်။ စိတ်တူကိုယ်တူ သူငယ်ချင်းတွေက ဘဝမှာ အရေးပါပုံ၊ မိသားစု က ကိုယ်ကချစ်သည်ဖြစ်စေ မချစ်သည်ဖြစ်စေ (အထူးသဖြင့် အမေ) ကိုယ့်အပေါ် တကယ့်အရေးကြုံချိန်ကျတော့ အနားမှာ ရှိနေပေးတာတွေ။ တောင်းဆိုး ပလုံးဆိုး ကိုသာပစ်ရိုးထုံးစံရှိတယ် သားဆိုးသမီးဆိုး ကိုမပစ်ဘူးဆိုတဲ့ စကားပုံ ကို ပိုနားလည်တတ်လာတာ ခံစားတတ်လာတာ (မှတ်ချက် ကိုယ်က သားဆိုးမဟုတ်ပါ ထပ်ဆင့် မှတ်ချက် သမီးဆိုးလဲ မဟုတ်ပါ)။
နှစ်တနှစ်ကုန်တိုင်း ကုန်တိုင်း သူငယ်ချင်းတွေက ဖေ့ဘွခ်မှာ ဘလောခ်တွေမှာ အီးမေးလ်တွေမှာ new year resolution တွေ ရေးရေး ပို့တတ်ကြပါတယ်။ ကိုယ်လဲ လုပ်ချင်တာလေးတွေ မှတ်စု ထားလေ့ရှိပေမယ့် သေချာ ချရေးတာမျိုးတော့ မရှိခဲ့ဘူးပါဘူး။ ဒီနေ့ နန်းညီ ဘလောခ် ကိုဖတ်တော့ သူက “ဒါတွေ လုပ်တော့မည်” ဆိုပြီး လုပ်ချင်တာလေးတွေ ရေးထားတာတွေ့လို့ ကိုယ်ဒီ ယိုးဒယား ကို အလုပ်နဲ့ စပြောင်းလာကာစ က လုပ်ထားတဲ့ ရည်မှန်းချက်လေးတွေ ကိုသွားသတိရမိတယ်။ များများ မဟုတ်ပါဘူး (၄)ခုထဲပါ။ ကိုယ်က မိနန်းညီ လို မယ်လောဘ မှမဟုတ်တာနော်။ A4စက္ကူပေါ်မှာ မာကာ နဲ့ရေးထားတဲ့ လုပ်မယ့် အရာလေးချက်က
2. အလုပ်များကို ပြီးမြောက်အောင်လုပ်ရန်
အမှတ် ၂ နဲ့ အမှတ် ၃ ကြားမှာ ဘောပင်နဲ့ သေးသေးလေးရေးထားတာ တချက် ရှိပါသေးတယ် အဲ့တာပါထည့်တွက်မှ ၄ ချက်ပါ။ ဘာလဲဆိုတော့ ဝိတ်လျော့ရန်တဲ့။ ကိုယ်က ဝမနေပါဘူး အရပ် ၅ ပေ ၁၁ မှာ ပေါင်ချိန်က ၇၀ ကီလို ဆိုတော့ ဘီအမ်အိုင်နဲ့တွက် ရင် လိုတောင်လိုနေပါသေးတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ မဝတာက လှတာမှမဟုတ်တာနော်။ မဝပေမယ့် ဗိုက် က နည်းနည်း ပူချင်နေတာ ရှိသေးတယ်လေ။ နောက် အသက်က ၃၀ နားနီးလာပြီဆိုတော့ ဗိုက်ပူမှာကို စိတ်ပူရတယ်။ ယောက်ျားတွေဟာ ၃၀ ကျော်တာနဲ့ မက်တယ်ဘောလဇင် အပြောင်းအလဲအရ ကိုယ်အလေးချိန်တိုးလာတတ်တာကိုး ဒါတောင် ဘီယာ တွေ ဆေးလိပ်တွေ အရက်တွေ ကိုယ်က မသောက်ပါ။ (မသောက်တော့ပါ) ထားပါ အဲ့တာတွေက လုပ်ရန်ရေးထားတာ ရောက်ကာစကဆိုတော့ ခုဆို နှစ်နှစ်ရှိပြီပေါ့။ တလောကတော့ ၃ လလောက်ကထင်ပါတယ် ၃ ခု ကိုခြစ်ထုတ်လိုက်ပြီးတော့ ၁ ခုပဲထားတော့တယ်။ ဖြစ်မလာလို့လား? မလုပ်နိုင်တော့လို့ လား? ဖြစ်မြောက် ပြည့်စုံသွားလို့လားဆိုတာကိုတော့ ပရိတ်သတ်အတွက် လောလောဆယ် ပဟေဠိ လုပ်ထားမယ်နော်။ ကိုယ့်စာတွေကို ပုံမှန်ဘတ်နေတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့ ကိုယ်ဘာတွေ လုပ်ဖြစ်သွားတယ် အောင်မြင်သွားတယ်ဆိုတာာ သိပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ့်အကြောင်းတော်တော်များများက ကိုယ့်စာတွေမှာ reflect ဖြစ်တာကိုးနော်။ ထားပါတော့ အခု တခုပဲကျန်တော့တယ်ဆိုတာကတော့ ပိုက်ဆံစုဖို့ပါပဲ။ အဲ့တာတခုတည်းကိုပဲ သီးသန့် ကြီးကြီးလေး ရေးထားပြီးတော့ ဘုတ်မှာ ကပ်ထားတယ်။
ကဲပါလေ ပြောချင်တာတွေလဲ အများကြီး ဆိုင်တာရောမဆိုင်တာတွေပါ အကုန်ပြောပြီးပြီဆိုတော့ (တီချမ်း ထုံးစံအတိုင်း) ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆိုင်တာကိုပြန်ကောက်ရပါမယ်။ ဒီနှစ် ရဲ့ ဒီလ က ဘာလို့ထူးခြားတာလဲပေါ့။ မနေ့က ၂၀ ရက် ၁၀ လ ၂၀၁၀ ခုနှစ်လေ သတိထားမိကြပါသလား? ၂၀၁၀၂၀၁၀ ပေါ့။ အမှန်ကတော့ ဒီပိုစ့်လေးကို မနေ့က အမှတ်တရ တင်ချင်တာ။ ထုံးစံအတိုင်း ဟိုလုပ်ဒီလုပ်နဲ့ နေ့ကူးသွားတယ်။ မနေ့ညက ရုပ်ရှင် ၃ ကားကြည့်တယ်လေ။ နန်းညီထက် ဒီတခုမှာတော့ ၃ ဆ သာတာပေါ့နော်။ ဟဲဟဲ။ (မိန်းမ မဆန်စွာ ရယ်လိုက်သည်)
နောက်ဒီလထဲမှာပဲ ရက်တရက်ရှိသေးတယ် အစကတော့ အဲ့နေ့မှာပဲ မြန်မာ့ သမိုင်းအတွက် တခုခု ဖြစ်တော့မလိုလို ရွေးကောက်ပွဲပဲ လုပ်တော့မလိုလို နာမည်ကြီးခဲ့သေးတဲ့ ၁၀ ရက် ၁၀ လ ၂၀၁၀ ပါပဲ အတိုကောက်ရေးရင်တော့ ၁၀.၁၀.၁၀ ပေါ့။
သတိထားမိတဲ့သူတွေလဲထားမိကြပါလိမ့်မယ် မထားမိတဲ့သူတွေလဲ ဘာသိဘာသာပေါ့။ တကယ်တော့ တနေ့ ၂၄ နာရီဆိုတာထက် တလ ရက် ၃၀ ဆိုတာထက် တ နှစ် ရက်ပေါင်း ၃၆၅ (သို့) ၁၂ လ (သို့) ရက်သတ္တ ၄၈ ပတ် စတာတွေဟာ လူ့ဘဝမှာ လုပ်ရမယ့် အရာတွေ လုပ်စရာရှိတဲ့ အရာတွေ လုပ်သင့်တဲ့ အရာတွေ လုပ်ချင်တဲ့ အရာတွေနဲ့ ယှဉ် လိုက်တော့လဲ အလကားပါပဲ။ အလဟသတ် လို့ ပြောချင်တာတော့ မဟုတ် အရေးသိပ်မကြီးဘူးလို့ ပြောချင်တာပါ။ အချိန်ဆိုတာ ပညတ်ပဲမှလား။
တကယ့်တကယ် လုပ်ချင်တာ ကတော့ ခဏ ရပ်ပြီး ဘဝ ကို ကြည့်ချင်တာပါ။ ငယ်ငယ်တုံးက သင်ထားတဲ့ အင်္ဂလိပ် ကဗျာ လေး တပုဒ် ကိုရွတ်ရင်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။
ဖဘမှာ အမတယောက်ကလာပြောလို့ နောက်ထပ်ထူးခြားတာတခုပါ ဒီလ က သောကြာ နဲ့ စနေ တနင်္ဂနွေ (၅) ရက်စီ ရှိပါတယ် လတလ မှာ ဒီလို ရှိဖို့ ဆိုတာ ခဲယဉ်းပါတယ်။
Posted on October 21, 2010 February 7, 2018 Author AdminTChenCategories Uncategorized, Uncategorized, ရောက်တတ်ရာရာ
3 thoughts on “သတိထားမိကြပါသလား…?”
ခဏရပ်ပြီး ဘဝကိုကြည့်လိုက်ရင်တော့ ပြန်တော့မယ်လို့ချည်း အဖြေထုတ်မိနေတော့တာပဲ။
ခက်တာက လစာများများ ရဖူးပြီးသွားတော့
Bliss of Us says:
အင်း စဉ်းစားစရာပဲ …:)
Previous Previous post: အချစ်ရဲ့ အရသာ
Next Next post: ယောက်ျား အသုံးချနည်း တစ်ရာ